नेकपा Archives - Lokpati.com
Tag - नेकपा
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ह्वीप नमान्ने सांसदलाई हटाउन नसक्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तक्रिया...
गुल्मी। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले केपी शर्मा ओली पदको भोको भएको बताएका छन्। नेता विष्टले प्रधानमन्त्री ओली पदको लोभले कुर्सीमा बसिरहेको बताए।
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओली टुप्पीदेखि पैतलासम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको बताएका छन्।
शुक्रबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदरको फैसला सुनाउँदा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल चितवनको एक रिसोर्टमा थिए ।...
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछि नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले बैठक बोलाएको हो।
प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आगामी रणनीति तय...
काठमाडौं। नेकपा केपी ओली समूहले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्न नेकपा (ओली) समूहले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन...
सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५ पुसपछि आफूहरु नयाँ प्रकारको युद्धमा रहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सही...
ओलीलाई भीम रावलकाे प्रश्न : सत्तामा बसेर अदालतलाई धम्क्याउने ?
काठमाडौं। नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गुटस्वार्थको बाटोमा तल्लीन रहेको बताएका छन्। उनले ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याएको आरोप...
ओली समूहमा तीव्र असन्तुष्टि : संस्थापन नेकपामा को–को फर्किएलान् ?
काठमाडौं। सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाएर मात्र आफूले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको भन्दै नेता–कार्यकर्ता आफूतिर तानेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा पछिल्लोसमय अनेकौं समस्याहरुबाट जेलिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले ओली...